TAKAITRA NAVELAN’I ENAWO : Tafakatra 38 ireo namoy ny ainy tany amin’ny faritra Atsinanana
Tafakatra hatramin’ny 38 amin’ izao fotoana izao ny tarehimarika ho an’ ireo olona namoy ny ainy ho an’ny Faritra Atsinanana, raha 60 000 kosa ny tra-boina hatramin’ izao, Olona 51 kosa no naratra mafy, nahatratra 11 200 ny trano rava. 22 mars 2017
Mbola tarehimarika vonjimaika ihany aloha ireo ary nangonina nandritra ny fandalovan’ny mpikambana amin’ny Governemanta, notarihin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena sy Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena tao Vatomandry ny sabotsy 18 marsa teo. Raha hiverenana dia olona 17 miampy ankizy roa, 8 taona sy 7 volana no namoy ny ainy tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Ifasina voalohany, Vatomandry, izay fianakaviana iray ihany izy ireo.
Ireto farany izay nihevitra ny hifindra toerana kanefa dia nihotsahan’ny tany sy lasan’ny rano , araka ny fanazavana nentin’ny Solombavambahoakan’ i Vatomandry, Rolland .
Nisy olona 16 hafa ihany koa namoy ny ainy tao amin’ny Distrikan’ i Brickaville araka ny tatitra voaray tamin’ny Lehiben’ny Distrika, Toalina Zafindrabary. Amin’ireo 16 namoy ny ainy tao Brickaville ireo dia ny 10 no tao amin’ny Fokontany Ambalatenina, Kaominina Ambohimanana, raha roa hafa mbola tsy hita popoka vokatry fihotsahan’ny tany.
Mbola tao amin’ity Distrika ity ihany, dia iray no maty tao Andekaleka, iray tao Andovoranto, iray tao Ambinaniniony, roa tao Antsampanana ary iray tao Brickaville tampon-tanàna. Olona iray ihany koa no namoy ny ainy tao Mahanoro, raha roa tao Marolambo. Raha atambatra izany dia tafakatra 38 ireo maty tamin’ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo, raha ho an’ny Faritra Atsinanana manokana. Raha ny teo amin’ny isan’ny tra-boina mbola tsy manan-kialofana kosa hatramin’ izao dia mahatratra 60 587 ny fitambarany ho an’i Vatomandnry sy Brickaville.
Ho an’ity farany dia nahatratra 4 699 trano rava izay ahitana sekoly sy toeram-pitsaboana.
Tonga nitsapa alahelo ireo havana nana-manjo sy nitondra fanampiana ho an’ireo tra-boina ireo mpikambana anatin’ny Governemanta tonga tao Brickaville ny sabotsy 18 marsa lasa teo.